Wararka Maanta: Talaado, Dec 27, 2011-Maxabiis Itoobiyaan ah oo sheegay inay cuntadii ka soomeen illaa inta laga sii-daynayo Xabsiga ay ku xiran yihiin
Qaxootigan oo ka cabanayey hay’ada Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa sheegay inuu wasiirka arrimaha guduhu ka raacay hay’adaasi, isla markaana amar ku siiyay inuu xiro dhammaan guddigii ay qaxootigaasi iska soo xuleen oo rag iyo dumarba isugu jiray.
Dadkan qaxootiga ah ee cabanayey ee xabsiga loo taxaabay ayaa eheladoodu HOL u sheegay inay cuntadii joojiyeen ilaa inta xabsiga laga soo daynayo aanay cunto cunayn.
"Habeen hore ayey diideen inay wax cunto ah cunaan oo aanu u gayno, waxaanay yidhaahdeen cunto ma doonayno ilaa inta aanu xabsiga ka baxayno oo aanu cadaalad helayno" sidaas waxa yidhi Qaar ka mid ah eheladii dadkan xidhxidhan oo aanu arrintan wax ka waydiinay.
"Hay’adaha xuquuqda adaamaha ee Somaliland waxaanu ka codsanaynaa in arrimahayaga hoos u eegaan" ayuu mid ka mid ah Qaxootigan Itoobiyaanka ah oo ka cabanayey cadaalado daro..
Dadkan Qaxootiga ayaa muddo bil ku dhow ka cabanayey hay’ada UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, waxaanay ku eedeeyeen hay’adaasi inay ka jareen caawimo ay siin jreen, haseyeeshee, waxa Qaxootigan iyo masuuliyiin ka tirsan UNHCR kulan la yeeshay wasiirka Daakhiliga Somaliland balse markii uu kulankii dhamaaday ayuu wasiirku amar ku bixiyey in la xidho sida ay noo sheegeen ehelada dadkan la xidhay ee Itoobiyaanka ah.
Waxaanay sheegeen in wasiirku ku amray inay ka guuraan halka ay degan yihiin, isla markaana ku noqdaan dalkoodii, hasyeeshee arrintaasi waxa si weyn uga cawday qaxootigan oo sheegay in aanay dalkoodii ku noqon Karin sababo amni dartood.
Eheladda dadkan xidhan ayaa sheegay inay cunto joojinta ay ku dhawaaaqeen maxaabiistaasi u gudbiyeen wasaaradda Daakhiliga balse aanay wax garowshiiyo ah ka bixin arrintaasi.
Waa markii ugu horaysay oo dad ajanabi ah oo Somaliland ku xidhani sheegaan inay cuntada joojiyeen, ilaa haddana xukuumadda wax war ah kama soo saarin arrintaasi.